Owesifazane "uzilengise wafa" esesokeni - Ilanga News
Home Izindaba Owesifazane “uzilengise wafa” esesokeni
Owesifazane “uzilengise wafa” esesokeni
Ushiye incwadi ekhala ngokwehlulwa wumhlaba
UNKZ Nomcebo Mbanjwa ozilengise wafa phambi kwendodana yakhe. Ushiye incwadi ebalisa ngokuthi umhlaba umehlule.
USHIYE iheheba lencwadi owesifazane wase-Wyebank, nga-sePinetown, ozilengise wafa phambi kwe-ndodana yakhe enezinyanga eziwu-15 ubudala, ekubo kwesoka lakhe, ngoba ekhala ngokuthi umhlaba sewumehlule, akalungelwa yilutho empilweni.
Omakhelwane nesoka bathi ba-fike ingane kamufi ikhala, ithinta izinyawo zikanina eseshonile. Kuthiwa ngaphambi kokuba azi-bulale uNkz Nomcebo Mbanjwa (21), uqale wayokweleta obhiya ababili kwamakhelwane wakhe, wabashayela ekhanda, wabe ese-thatha iphepha nepeni wabhala iheheba lencwadi echaza ngobu-nzima abebhekene nabo empilwe-ni. Kuthiwa ukhale ngokungalu-ngelwa yilutho, okumenze wathatha impilo yakhe.
ILANGA lixoxe nesoka likamufi abelivakashele endlini yalo azile-ngisele kuyona uMnu Musa Banda (25), okuyilona elifike kuqala
endlini lazithela phezu kwesidu-mbu sakhe silenga.
Lithi liphume kubo ngoLwesine ekuseni liya emsebenzini isimo si-sihle phakathi kwalo nentombi yalo, kungekho lutho olukhombisa ukuthi izokwenza into efana nale, futhi bengaxabene.
Lithi lisheshe labuya emsebe-nzini, lafica intombi yalo ihleli phezu kombhede ingagezile, igone indodana yayo. Lithi ibiphethe iphepha nepeni kukhona ekubhalayo, langanaka. Lithi kalizange liqaphele ukuthi kukhona okusha-ya amanzi ngesikhathi umufi elibuza ukuthi kungani lisheshe ka-ngaka ukubuya emsebenzini.
“Ngiphume endlini ngaya ku-makhelwane wami ngiyombheka, ngamfica ematasa okwenze kanga-ze ngahlala, ngasheshe ngabuya. Ngifike endlini etatazela, waphi-nda wangibuza ukuthi kungani ngisheshe kangaka ukubuya ku-makhelwane. Ungicele ukuba ngi-mdedele endlini ngoba usafuna ukugeza. Ngiphume ngayothenga i-airtime esitolo esiseduzane.
“Ngihambe isikhathi esincane ngabuya endlini sekukhiyiwe, nga-ngqongqoza, kwangavula muntu. Ngizwe kukhala ingane yakhe, okwenze ngalunguza ngefasitela ngabona isidumbu sakhe silenga, ingane ibambe izinyawo zakhe, izama ukumdonsa.
“Ngimemeze omakhelwane uku-ba bazongibonisa, sagqekeza
umnyango wendlu sazama ukume-thula. Simehlise esevele esethu-le,” kusho uMnu Banda.
Uthi eceleni kwesidumbu sakhe bathole iheheba lencwadi alibha-lile, exolisa ngesinqumo asithathi-le. Uthi encwadini ukhale ngoku-thi ubesekhathele wukuphila nge-nxa yokuthi impilo yakhe ibinga-hlangani kahle, konke abezama ukukwenza bekungalungi, nomazisi ubengawutholi yize sekukaningi ewubhalisela.
Encwadini ayibhalile ucele ukuba indodana yakhe bayibuyi-sele kuyise wayo oyizalayo kube nguyena ozoyikhulisa.
ILANGA lishayele unina kamufi ongamzali uNkz Ntombizini Nxu-malo, oveze ukuthi indodakazi ya-khe ibinazo izimpawu zokuba ne-zinkinga kodwa benganakile.
“Ubejwayele ukuzivalela ye-dwa, enolaka futhi enesandla esi-lula engakhethi noma ngabe yi-ndoda. Ubesenenyanga ahamba lapha ekhaya esehlala nesoka lakhe.
“Nakhona wazihambela ngoku-thanda kwakhe akaxoshwanga muntu. Besimenzela yonke into ayidingayo simkhulisela nendoda-na yakhe,” kusho uNkz Nxumalo.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthi amaphoyisa avule idokodo lophenyo ngokushona komuntu.
Previous articleSimiswe nomphathi omkhulu isikhulu ‘esijivaza amanesi’
Next articleI-mut isabisa ngokumisa izitshudeni eziphehla udweshu